Wiirtuu filannoo, Baahir Daar, Waxabajjii 21, 2021
Filannoo biyyoolessaa Itiyoopiyaa ja’affaa kaleessa geggeessameen magaalaalee naannoo sanaa keessatti nagana xumuramuu isaa komiishinerri komiishina naannoo Amaaraa Tekolla Ayifokkiruu ibsanii uummata nagaa jaal’atuu fi qaamotii naga eegsisan galateeffataniiru.
Akkuma kanaan adeemsa filannoo kaleessaan yakkawwan xixiqqoon kan raawwataman yoo ta’u, battala to’annaa jala ooluu isaa komishiner Tekollaan ibsaniiru.
Akka komiishinichi jedhanitti Shawaa kaabaa aanaa Minjaar Shenkoraa keessatti namni tokko naannoo sagaleen itti kennamutti waraqaa bittimsuu dhaan dadammaqiinsa utuu kennuu to’annaa jala oolfamee qorannaan geggeessamee adeemsi seeraa mana murtii aanaa Minjaariin dhaddacha battala taa’een geggeessamee qarshiyy kuma 8 adabi itti muramee jira jedhan.
Haaluma wal fakkaatun Goojjam dhiyaa godina Jaabii Xehinaan wiirtuu filannoo ganda 16f bulchaa kan ta’an guyyaa kaleessaa saanduqa kaardii filannoo baatee ture hatuu dhaan boolla bishaanii keessa kan dhokse yoo ta’u, humoonni nagaa eegisisan hordoffii taasisaniin meeshaan sun utuu hin miidhamin argamuu isaa fi shakkamaan sunis to’annaa jala oolee dhimm isaa qulqulleessamaa jira jedhameera.
Gonder kaabaa aanaa Dabaati bakka addaa Ajjiree Jaanooraa jedhamutti guyyaa kaleessaa namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin gara wiirtuu filannoo dhaquu dhaan humnoonni naga eegdotaa hidhannoo akka hiikkatan ajajanii rasaasa dhukaasaniin miseensi poolisii tokko yoo du’u, kaan immoo madaa’uu komiishinerichi ibsaniiru.
Kaleessa gara galgalaa kan xumurame adeemsi sagalee kennuun halkan guutummaa sagaleen laka’amaa bule. Wiirtuleen sagalee laka’auun xumurames ba’ii filannoo kan yeroofii ifa ta’uu isaaf uummati sagalee kennes wiirtulee filannootti argamanii ba’ii sana ilaalaa kan turan ta’uu argeera jechuun Aster Misgaanaaw Baahir Daar irraa gabaasteetti.